Angry Birds22.25.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.25.1 လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Angry Birds 2
Angry Birds2၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Google Play ရဲ့ပွဲတော်မွမ်းမံမှုများနှင့်အတူအားလပ်ရက်အတှကျအဆငျသငျ့ Get
2018 ၏အန်းဒရွိုက် Excellence ဂိမ်း🏆🏆
လူအပေါင်းတို့သည်အဖိုးတန်ကြက်ဥကယ်ဖို့ - ထို piggy '' တာဝါတိုင်မှာငှက်တို့သည်လည်းစိုကျပကျ crashing သူတို့ကိုဆောင်ကြဉ်းရန်လေးခွကိုသုံးပါ။
Angry Birds ရဲ့ကမ္ဘာနယူး? Angry Birds ဂိမ်း2အထင်ကရဇာတ်ကောင်အားလုံးသိကြနှင့်ကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာ၏နှလုံးသားများ (နှင့်အားလပ်ချိန်မှာအချိန်) ဖမ်းဆီးရမိသောပျော်စရာဂိမ်းတွေ့ကြုံခံစားရဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အလှဆင် Angry Birds ဂိမ်းဝါရင့်? သငျသညျဂန္ Angry Birds ဂိမ်းအကြောင်းကိုကိုချစ်အရာအားလုံးတချို့ကြောက်မက်ဘွယ်သစ်ကိုဖြည့်စွက်အတူဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဆော့ကစားသောအခါ, စိုကျပစျမှရသောငှက် Choose ပေါင်းစုံဇာတ်စင်အဆင့်ဆင့်အပေါ်ကို ယူ. , ကမ္ဘာအဝှမ်းမှကစားသမားများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်း။
●ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့! --- Angry Birds ဂိမ်းကို2ကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ Angry Birds ဂိမ်းကို2အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခံရနိုငျသျောလညျးရရှိနိုင် optional ကို In-app ကိုဝယ်ယူမှုရှိပါသည်။
- မည်သည့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာမှ browse ဖို့အလားအလာနှင့်အတူအဝေးဂိမ်းထံမှကစားသမားယူနိုငျသောအငျတာနကျမှတိုက်ရိုက်လင့်များ
- တတိယပါတီများထံမှ Rovio ထုတ်ကုန်များနှင့်လည်းထုတ်ကုန်များ၏ Advertising ကြော်ငြာ
Angry Birds2အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Angry Birds2အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Angry Birds2အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Angry Birds2အား အခ်က္ျပပါ
rejab စတိုး 1 281
Angry Birds2ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Angry Birds2အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.25.1
ထုတ်လုပ်သူ Rovio Entertainment Ltd.
File Size: 171.63MB
Release date: 2019-01-18 03:52:40
Angry Birds2APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ